Best iOS File Nyefee gaa na nyefee faịlụ na iOS Devices
> Resource> iOS> Best iOS Files Nyefee gaa na nyefee faịlụ na iOS Devices
Ọ bụrụ na ị nwere otu iOS ngwaọrụ, i nwere ike iji nyefee faịlụ n'etiti ya na PC. Ọ bụrụ na ị nwere 2 ma ọ bụ karịa iOS ngwaọrụ, dị ka iPhone, iPod, ma ọ bụ iPad, mgbe ụfọdụ, ịkọrọ faịlụ n'etiti 2 iOS ngwaọrụ, i kwesịrị nyefee faịlụ kwa. Iji mee ka ọ dị mfe nyefee faịlụ n'etiti kọmputa, iOS ngwaọrụ, ị kwesịrị ị na-agbalị a ọkachamara iOS File Nyefee Program - Wondershare TunesGo.
Download ikpe mbipute nke Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac)!
Gịnị mere Wondershare TunesGo na-atụ aro ka a usoro ihe omume iOS ndabere faịlụ?
Wondershare TunesGo bụ ọkachamara iOS faịlụ transfer usoro. Ọ Nyefe ọdịyo faịlụ, gụnyere music, iTunes U, Pọdkastị, videos (ma ibudatara na iPhone ma ọ bụ weghaara iPhone), na foto na Photo Library na igwefoto Roll site na iOS ngwaọrụ ọzọ iOS ngwaọrụ, ma ọ bụ site na iOS ngwaọrụ na kọmputa . Nke a bụ ihe a onye ọrụ kwesịrị ime mgbe grabbing ụfọdụ faịlụ site na Internet ma iTunes mgbe na-enye ohere na-eme n'ihi na nke nwebisiinka mbipụta. TunesGo-eme ihe iTunes apụghị ime. Ọ bụ ihe dị oké ngwá ọrụ iji mee ka gị na mfe iOS ndụ. Iji nweta nkọwa ndị ọzọ n'ihi na nke a iOS faịlụ transfer ngwá ọrụ, biko gụọ Ama n'okpuru.
Key Njirimara nke a iOS File Nyefee - TunesGo
Detuo ha niile music site na iOS ngwaọrụ na nyefe na iTunes Library na kọmputa gị;
Nyefee na music, iTunes U, Pọdkastị site na iOS deivce na kọmputa ma ọ bụ ọzọ iOS ngwaọrụ ahụ;
Nyefee videos, gụnyere music video, movices, TV egosi site na iOS ngwaọrụ ka na kọmputa na ibe iOS ngwaọrụ ahụ;
Bugharịa Photos site na iOS ngwaọrụ ka na kọmputa na ibe iOS ngwaọrụ ahụ;
Copy listi ọkpụkpọ site na iOS ngwaọrụ iTunes Library (ugbu a nanị maka Windows version TunesGo);
Ebe a iOS Files Nyefee karịrị echiche?
1st,-eji nke a desktọọpụ ngwa nyefee iOS faịlụ n'etiti iOS ngwaọrụ, ihe iOS ngwaọrụ na kọmputa, faịlụ na iOS ngwaọrụ gaghị ehichapu ya. Ọ bụ ọdachi iji iTunes nyefee faịlụ na iOS ngwaọrụ nke bụghị onye ị synced na iTunes mgbe nile.
2nd, ọ bụ ọkachamara ngwa n'ihi na iOS nyefee faịlụ (music na vidiyo) azụ iTunes, kọmputa na ndị ọzọ na iOS ngwaọrụ. iTunes apụghị ime ya n'ihi na ị na niile. Ọ na-eme ebe iTunes dara mkpụmkpụ.
3ird, ọ na-ọ bụla song na video ka iOS ngwaọrụ enweghị incompatibility nsogbu. Ọ bụrụ na ọrụ mkpa itinye a video nke bụ ihe iOS ngwaọrụ dakọtara format, nke a iOS faịlụ transfer ngwa ga-amata na tọghata ọ na-iOS enyi na enyi usoro.
Wondershare TunesGo bụ otu n'ime ndị kasị ama iOS faịlụ transfer ngwaọrụ. E wezụga n'elu kwuru banyere, ugbu a, Wondershare TunesGo (Windows) na-enyere azụ elu iPhone na kọntaktị na SMS dị ka mma. Ntak ibudata ikpe mbipute inwe a na-agbalị ugbu a?
Soro Video Tutorial Ịmatakwu banyere iOS Files Nyefee
Olee otú ị na Download Music maka iOS na Android
Otú nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka iOS